Annaga nagu saabsan - Xuzhou Lena Import Dhoofinta Co., Ltd.
Dhalada sare ee Swing
Dhalada Saliida Saytuun
Dhalada Diffuser Reed
Xuzhou Lena Import and Export Co., Ltd., soo saaraha dhalooyinka quraarad ah ee Shiinaha, wuxuu leeyahay in ka badan 12 sano oo waayo-aragnimo ah bixinta xalalka baakadaha galaaska.
Waxaan bixinaa dhalooyin kala duwan oo galaas ah, sida dhalooyinka cabitaanka, caagagga casiir, dhalooyinka caanaha, dhalooyinka xashiishka, dhalooyinka qurxinta, dhalooyinka udgoonka, dhalooyinka saliidda daruuriga ah, xajiyaha shumaca, dhalooyinka malabka, dhalooyinka macaanka, dhalooyinka qaxwada, dhalooyinka kaydinta cuntada, iwm. .
Waxaan leenahay koox naqshad gaar ah oo naqshadeyn kara dhalada baakadaha ee aad rabto iyadoo loo eegayo fikradahaaga.Waanu ixtiraamaynaa oo taageernaa asalnimada waxaanan fikradahaaga u beddelnaa xaqiiqo.Maxay tani noqon doontaa wax sixir ah.
Alaabtayada ceeriin ee galaasyada ah ayaa lagu sameeyay kormeero tayo leh oo adag, u hoggaansan heerarka qaranka iyo dhoofinta, iyo kormeerka taageerada.Isla mar ahaantaana, waaxdayada wax soo saarku waxay leedahay nidaam maarayn wax soo saar oo dhamaystiran si loo xakameeyo kharashyada iyadoo la xakameynayo tayada si loo kordhiyo faa'iidadaada.
Shirkaddeennu waxa kale oo ay haysaa mashiinnada gogol-xaadhista koronto oo dhan si loogu sameeyo farsamaynta qoto-dheer ee dhalooyinka dhalooyinka.Nidaamkeena qoto dheer waxaa ka mid ah daabacaadda shaabadda xariirta ah, shaabada kulul, dhaxan, ciid, rinjiyeynta iyo koronto-sameynta, iwm. OEM iyo ODM order waa la soo dhaweynayaa, waxaan ku faraxsanahay inaan naqshadeyno ama soo saarno dhalooyinkaaga gaarka ah, si la mid ah fikradaada iyo sawirkaaga.Waxa aan rabno inaan sameyno waa inaan siino adeeg hal joogsi ah saaxiib kasta.
Kooxdayada iibka caalamiga ah waxay leedahay xirfado isgaarsiineed oo heer sare ah waxayna fahmi karaan welwelka dhabta ah ee macaamiisheena.Sanado badan oo shaqo adag ah ka dib, waxaan la sameynay xiriir wanaagsan macaamiisheena, waxaana kasbaday kalsoonida ay aduunka ku qabaan.
Kalsooni buuxda ayaanu ku qabnaa alaabadayada waxaanan ku siin karnaa muunado bilaash ah kormeerkaaga.Alaabtayada dhalada ah ayaa loo dhoofiyay in ka badan 100 waddan iyo gobollada adduunka oo dhan.
Ku soo dhawoow warshadeena si aad u booqato oo uga gorgortanto.
Beerta Warshadaha ee Baduan, Degmada Tongshan, Magaalada Xuzhou, Gobolka Jiangsu
6-da ugu sarreeya ee soo saara dhalada cadarka adduunka oo dhan
6 dhalada cadar ee ugu sareeya...